အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: လျှို့ဝှက် စပိုင်ကင်မရာများ
ဒီလို အချိုရည်ဗူးတွေမှာ ကင်မရာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်ပြောရင် ဘယ်သူယုံနိုင်မလဲနော်..
အဲဒီအချိုရည်ဘူး တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါ
ဒါလေးကလဲ မီးခြစ်ပုံစံ ဗီဒီယို ကင်မရာလေးပါဘဲ
MP3 ထဲ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စပိုင်ကင်မရာပါ
ဒါကတော့ မီးပလပ်ပုံစံ ကင်မရာပါ... ဟော်တယ်တို့ ရုံးခန်းတို့လိုနေရာမျိုးမှာ လျှို့ဝှက် တပ်ဆင်လို့ အကောင်းဆုံးပုံစံပါ.. (သတိပြုကြပါရန်)
မျက်မှန်မှာ တပ်ဆင်တဲ့လျှို့ဝှက်ကင်မရာလေးပါ.. နားကြပ်လေးတောင် ပါသေးတယ်နော်...
နာရီမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ကင်မရာလေးတွေပါ
ဘောပင်လေးတစ်ချောင်း ချိတ်ထားပြီး လာစကားပြောနေရင်လဲ သတိထားနော်...မဟုတ်တာတွေ လျှောက်မပြောမိစေနဲ့........
ဦးထုပ်ဆောင်းထားရင်လဲ သတိထားတဲ့... ဦးထုပ်မှာလဲ ကင်မရာ တပ်လို့ရတယ်နော်
နောက်ဆုံးတော့ လည်စည်း စည်းထားတဲ့သူတောင် သတိထားရမလို ဖြစ်နေပြီ..
ဒါကလည်း လည်စည်းမှာ လျှို့ဝှက်တတ်တဲ့ ကင်မရာပါဘဲ
ဒီအင်္ကျီကြယ်သီးဟာ ကင်မရာပါလို့ ဘယ်သူက ထင်ပါ့မလဲနော်။
ဂျပန်နည်းပညာနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်
Covert Tissue Box DVR Camera (တစ်ရှူးဘောက်စ် ကင်မရာ)
ဒီပိုစ့်ကို ကျွန်မရဲ့ ယခင် ဘလောဂ့်အဟောင်းမှာ တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. ယခု တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ အသစ်ထပ်မံ ပေါ်လာတဲ့ ကင်မရာများကို ထပ်မံထည့်သွင်းပြီး ဗဟုသုတအတွက်ရော.. သတိပြုကြဖို့အတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အထက်ပါ လျှို့ဝှက် ကင်မရာ အမျိုးအစားတွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ တစ်နေရာထဲမှာ ၀ယ်ယူလိုပါတယ်ဆိုရင် http://www.chinavasion.com/index.php/cName/surveillance-equipment-spy-camera/ မှာ လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
33 Responses to “လျှို့ဝှက် စပိုင်ကင်မရာများ”
အဲဒီလိုသာဆိုရင် နတ်သမီးတို့တော့ နေစရာကိုရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး..။
ပုံတွေ မမြင်ရဖူးရယ် ၅ထိတော့ မြင်ရတယ်
ပုံတွေ အကုန်မမြင်ရဘူးနော် .. ဘာဖြစ်လို့ လဲ သိဘူး။
များတို့ lotion လိမ်းချင်တာတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လိမ်းဖို့ မလွယ်တော့ဘူး..
ဟုတ်ပ. .အောက်ကပုံတွေမမြင်ရပါဘူး. မချောရေ.. ပြန်တင်ပါ..း)))
ဟော်တယ်တွေမှာ နာရီဆို အကုန်စစ်ရမလိုပဲ၊
တစ်ချို့ကို မကာအိုနဲ့ ရှန်ကျန်းဈေးတန်းတွေမှာ တွေ့ဘူးပါတယ်၊
ဟုတ်ပ မမချောရေ ကျွန်တော်တိုတောင်မှဘယ်မှမသွားဝံ့စရာဘဲ ခေတ်ကြီးကလဲဆမ်ပြာလိုက်တာနော် အားလုံးလုံလုံခြုံခြုံရှိပစေ
သိပ်ထူးဆန်း အံ့သြဖို့ ကောင်းတာဘဲ။ နည်းပညာတွေကို ကြောက်တောင်ကြောက်လာပြီ။
နာရီရယ် ခါးပတ်ရယ်ကို ကြောက်တယ်။
ဒေါ်ချောက ထောက်လှမ်းရေး သင်တန်းဆင်းထင်ပ..
လမ်းကြုံရင် ကင်မရာ ဘောလ်ပန်လေးများ လက်ဆောင်ပေးပါက အသာတကြည်ယူပါမည် ခင်ညာ။
ဟုတ်တယ် အမရေ နည်းပညာတွေ တိုးတက်တာ ကောင်းလည်းကောင်းတယ် မကောင်းလည်းမကောင်းဘူးနော် :)
ဒုက္ခပဲ၊ အိမ်သာတက်ရင် သတိထားရတော့မယ်။ ပုံတွေ အကုန်မြင်ရပါတယ် ချောရေ၊ အေးချမ်းပါစေ။ အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်လေး ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းပါစေ။
မမချောကော.. အပြင်သွားရင် ကင်မရာ ဘယ်နားမှာ ဆောင်သွားလဲ.. ဟိဟိ
နောက်ဆုံးကင်မရာလေးလိုချင်တယ် ချော။ သူများကို ဒုက္ခပေးဖို့တော့ ဟုတ်ပါဘူး။ ဘုန်းဘုန်းက တောသားဆိုတော့ သိတယ်မလား။ နေရာတိုင်းမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်နေတာလေ။ အလင်းစက်ပြောသလိုပဲ တစ်ခါတစ်လေ ရိုက်ချင်ရဲ့သားနဲ့ မရိုက်ရဲဘူး။ ရှက်လို့လေ။ အဟိ။
အတွေးတွေများပြီး အေပရယ် ၁-ရက်နေ့ ရေးမလို့ဟာကို မေ ၁-ရက်နေ့လို့ သွားရေးမိတယ်။ သီရိလင်္ကာကို ဒီည ၉:၁၅ မှ ထွက်မယ်။ အေပရယ် ၈-ရက်နေ့ကျရင် မလေးကို လွင့်မယ်။ ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေ ချော...
အဲဒါမျိုး ဟိုနေ့က တီဗွီမှာ ကြည့်လိုက်ရသေးတယ် :P
ဒီလို ကင်မရာတွေနဲ့ ရိုက်လာတဲ့ documentary တွေ ဒီက တီဗီအစီအစဉ်တွေမှာ မကြာခဏ တွေ့ဖူးတယ်၊ အရာရာ စိစစ်တင်းကျပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို သတင်းသွား ယူရင် သုံးကြတယ်၊ အခုတော့လည်း ကမ္ဘာကြီး တခုလုံးက ဂျိန်းစဘွန်းတွေနဲ့ချည်း ပြည့်နေပြီပေါ့..၊း)
စကားမစပ် အဲဒီကင်မရာတွေ သယ်သွားပြီး နေပြည်တော်မှာ သတင်းသွားယူနေတာမဟုတ်လား တိတယ်နော် :P
ဟုတ်တယ် မချောရေ၊ အမျိုးသမီးတွေအတွက်
မအားတာနဲ့ မရောက်ဖြစ်ဘူး. ခုလာလည်တော့ စပိုင် ကင်မရာ နဲ့တည့်တည့်တိုးသွားတယ်။
ဝယ်ပြီး တစ်ခုလောက် တပ်ထား၇င် ကောင်းမယ်..အဟဲဟဲ..။
လူအချင်းချင်း မယုံကြည်မှုတွေ တိုးပွားလာစေပြီး သံသယတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်နေရတော့မယ့် စိတ်တင်းကျပ်ဖွယ်ရာ နေ့ရက်တွေ ဖြစ်လာနိင်တယ်။
(ညီ့နာရီက ဇီးရိုးဇီးရိုးဆဲဗင်းမင်းသားပတ်တဲ့ဟာနော်. ဈေးသိပ်ကြီးတာ) :P
ဒီခေတ်နဲ့တော့ လွယ်ဘူးဗျို့ အနောက်သွားရင်တောင် ကျီးလန့်စာစားဘ၀ရောက်ရတော့မယ့်ကိန်းပဲ
ကင်မရာတွေ များလာတာနဲ့အမျှ မြင်စရာတွေ များလာမှာပါဘဲ မချောရေ...
ဒီအတိုင် ဆိုရင်တော့အနေအထိုင်ဆင်ခြင်မှပဲ.. :P
မမြင်ဖူးတာတွေ မြင်ဖူးသွားတယ် ..
နိုင်ငံခြား စုံထောက် ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာဆိုရင်လည်း
သူတို့ သုံးတာတွေ ကြည့်ပြီး
အရမ်း သဘောကျတယ် ..
ကင်မရာလေးတစ်လုံးလောက် မချော ၀ယ်ပေးရင်ကောင်းမှာ
နော် မချော.. ၀ယ်ပေးပါလားဟင်
တချို့ရှပ်အင်္ကျီအိပ်ကပ်မှာဘောပင်ကိုညှပ်ထားပြီး အဲဒီဘောပင်ထိပ်ညှပ်တံကနေ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူတယ်တဲ့။
အင်မတန်မှ တိုးတက်တဲ့ နည်းပညာတွေဘဲ ။ အများကောင်းကျိုးအတွက် ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်
ဘောလ်ပင် ကင်မရာနဲ့ ကီးချိန်းကင်မရာ ကို ၄၀ sing doller နဲ့ similim square (singapore) မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်